Akụkọ - Iji ihe nkpuchi na nchedo onwe onye
Masgba ihe nkpuchi bụ ụzọ dị mkpa iji gbochie ọrịa iku ume. Mgbe ị na-ahọrọ ihe nkpuchi, anyị kwesịrị ịghọta okwu ahụ bụ "ahụike". A na-eji ihe nkpuchi dị iche iche eme ihe na ebe dị iche iche. A na-atụ aro ihe mkpuchi ihu nwere ike iji mee ihe na ebe ndị mmadụ na-ejupụta; Ihe nchedo nke nkpuchi ogwu ogwu di nma karie nke nkpuchi aru aru. A na-atụ aro ka ndị na-eje ozi n’ebe ọhaneze na-eyi ya mgbe ha nọ ọrụ; A na-akwado mkpuchi mkpuchi ahụike, yana ọkwa nchebe dị elu, maka ndị nyocha n'ọhịa, nlele na nnwale ndị ọrụ. Ndị mmadụ nwekwara ike na-eyi mkpuchi nkpuchi ahụike na ebe ndị mmadụ juru na ebe ọha na eze mechiri.
Mgbe ụmụ akwụkwọ na-apụ, ha nwere ike iyi masks nwere ike iwepụ. Ọ bụrụ na elu nkpuchi ahụ emetọ ma ọ bụ mmiri mmiri, ha kwesịrị dochie ihe nkpuchi ahụ ozugbo. Mgbe ị na-edozi nkpuchi mgbe ejiri ya, gbalịa izere imetụ aka na n'ime nke nkpuchi ahụ na aka. Mgbe ịmechara ihe nkpuchi ahụ, iji aka disinfection kwesịrị iji nlezianya mee.
A ga-atụfu ihe mkpuchi eji eme ihe na mkpofu ahịhịa Yellow. Ọ bụrụ na enweghị ahịhịa na-acha odo odo maka ụlọ ọgwụ, a na-atụ aro na mgbe emechara nkpuchi ahụ site na ị sprayụ mmanya na-aba n'anya, a ga-etinye nkpuchi ahụ n'ime akpa rọba ejiri tinye ya n'ime mkpofu ahịhịa na-emerụ ahụ.
Karịsịa, anyị kwesịrị ichetara gị na ebe ndị mmadụ jupụtara, ebe ikuku, dị ka bọs, ụzọ ụgbọ oloko, ụlọ mbuli elu, ụlọ mposi ọha na eze, na oghere ndị ọzọ dị warara, ị ga-eyi ihe mkpuchi ma rụọ ezigbo ọrụ nke nchedo onwe gị.